Rouxaani: Cawaaqib xuma ayaa ka dhan doonta haddii Maraykanka uu ka baxo heshiiska Nukleerka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Rouxaani: Cawaaqib xuma ayaa ka dhan doonta haddii Maraykanka uu ka baxo...
Rouxaani: Cawaaqib xuma ayaa ka dhan doonta haddii Maraykanka uu ka baxo heshiiska Nukleerka
Madaxwaynaha dalka Iiraan Xasan Rouxaani ayaa Ku dhawaaqay in Xukuumaddiisa Tehran, ay jawaab deg deg ah ka bixin doonto haddii Dowladda Maraykanka ay ka baxdo heshiiskii Nuclear-ka ee dalkaasi Iiraan.
Heshiiskan ayaa sanadkii 2015-kii waxaa wada gaaray quwadaha shanta ah ee Adduunka oo lagu daray dalka Jarmalka iyo Dowladda Iiraan.
Madaxwaynaha dalka Iiraan Xasan Rouxaani oo hadal toos ah ka jeedinayay television-ka Qaranka ayaa ka dhigay cawaaqib xuma ka dhan Marta burbur Ku yimaada heshiiska Nuclear-ka dalka Iiraan.
Rouxaani, ayaa madaxwaynaha dalka Maraykanka ugu baaqay inuusan ka bixin heshiiskaasi.
Madaxwaynaha dalka Maraykanka Donald Trump, ayaa horay u sheegay in heshiiskaasi uu yahay kii ugu xumaa abad Maraykanka uu galo, waxaana uu sheegay in uu ka baxayo inkastoo dhowr jeer uu saxiixay sharci Maraykanka uu heshiiskaasi uga sii mid ahaanayo.
Madaxwaynaha dalka Faransiiska Emanuel Macron, oo booqasho rasmi ah Ku tagay dalka Maraykanka ayaa madaxwaynaha dalka Maraykanka kala hadlay Arrimaha heshiiska nuclear ka ah ee quwadaha Adduunka iyo Iiraan u dhaxeeya.
Previous articleMasar: Madixii ololaha doorashada musharixii xilka madaxtinimo oo 5-sano lagu xukumay
Next articleDhul gariir xoogan oo ka dhacay dalka Turkiga